Fahaizana mifandray amin'ny endrika ara-tsaina sy molekiola
Dingana famaritana ny endrika amam-bika sy molekiola
Ny endrika ara-pihetseham- pandrefesana misy ny singa simika dia fampisehoana ny isa tsotra indrindra eo amin'ny singa mifangaro. Ny endriny molekule dia ny fampisehoana ny isa marina indrindra eo amin'ny singa ao amin'ilay fitambarana. Ity fehezanteny manaraka ity dia mampiseho ny fomba famahana ny formula empirical sy molekular ho an'ny fitambarana.
Ny olana ara-tsakafo sy molecular
Ny molekiolan'ny molekiolan'ny 180.18 g / mol dia nodinihina ary hita fa misy 40.00% karbaona, 6,72% hydrogène ary 53.28% oksizenina.
Inona avy ireo endriky ny molekiolan'ny molekiola?
Fomba hahitana ny vahaolana
Ny fitadiavana ny fombafomba mifototra amin'ny molekiola sy ny molekiola dia ny fomba fiasa mivadika hanombanana ny isan-jato.
Dingana 1: Karakarao ny isan'ireo singa ao amin'ny singa tsirairay amin'ny molekiola.
Ny molecule dia misy 40.00% karbaona, 6,72% hydrogène ary 53.28% oksizenina. Midika izany fa misy 100 gram ohatra:
40.00 g karbaona (40.00% amin'ny 100 grama)
6.72 grama of hydrogène (6,72% amin'ny 100 grama)
53.28 grama oksizenina (53.28% 100 grama)
Fanamarihana: 100 grama no ampiasaina ho an'ny halavan'ny lasitra mba hahamora kokoa ny matematika. Azo ampiasaina ny habeny rehetra, ny fifandraisana eo amin'ireo singa dia hitovy ihany.
Amin'ny fampiasana an'io tarehimarika io dia ahitantsika ny isan'ireo singa ao amin'ny singa tsirairay ao amin'ny 100 gram samihafa. Zarao ny isa grama isaky ny singa tsirairay ao amin'ny santionany amin'ny lanjan'ny atomika ao amin'ny singa (avy amin'ny tabilao periodika ) mba hahitanao ny isan'ny môle.
moles C = 40.00 gx 1 mol C / 12.01 g / mol C = 3,33 mol C
moles O = 53,28 gx 1 mol O / 16,00 g / mol O = 3.33 moles O
Dingana 2: Karohy ny isa misy eo amin'ny isa isaky ny singa tsirairay.
Fanteno ny singa miaraka amin'ny isa maromaro indrindra ao amin'ilay santionany.
Amin'io tranga io, ny 6,33 tapitrisa metatra no lehibe indrindra. Zarao ny isa maromaro amin'ny singa tsirairay amin'ny isa lehibe indrindra.
Ny tahan'ny mololo madinika indrindra eo anelanelan'i C sy H: 3.33 mol C / 6.65 mol H = 1 mol C / 2 mol H
Ny ratio dia 1 mol C ho an'ny 2 moles H
Fomba tsotra indrindra amin'ny O sy H: 3.33 moles O / 6.65 moles H = 1 mol O / 2 mol H
Ny ohatran'ny O sy H dia isa 1 O ho 2 h of H
Dingana 3: Fidio ny formulaire empirique.
Manana ny fampahalalana rehetra ilainay izahay hanoratra ny raki-tsoratra ara-tsiansa. Ho an'ny karazany 2 isaky ny boribory, dia misy mololo iray karbaona sy moleky oksizenina iray.
Ny formula formula dia CH 2 O.
Dingana 4: Hitovy ny lanjan'ny molekiolan'ny famolavolana.
Azontsika ampiasaina ny raki-tsoratra ara-pitsipi-pitenenana mba hahitana ny rôles molecule amin'ny fampiasana ny lanjan'ny molekiolan'ny fitambarana sy ny lanjan'ny molekiolan'ny formula.
Ny formula arithmetique dia CH 2 O. Ny lanjany molekule dia
Ny lanjan'ny molekiolan'ny CH 2 O = (1 x 12.01 g / mol) + (2 x 1,01 g / mol) + (1 x 16.00 g / mol)
Ny lanjan'ny molekiolan'ny CH 2 O = (12.01 + 2.02 + 16.00) g / mol
Ny lanjan'ny molekiolan'ny CH 2 O = 30.03 g / mol
Dingana 5: Fidio ny isa ao amin'ny formula formula empirical ao amin'ny formula molecular.
Ny endriny molekiola dia ny ankamaroan'ny ressource empirique. Nomena ny molekiolan'ny molekiolana izahay, 180.18 g / mol.
Zarao ity isa ity amin'ny alàlan'ny lanja molekiolan'ny raki-tsoratra ara-tsiansa mba hahitanao ny isan'ireo singafototra ara-pihetseham-po izay mamorona ny vondrona.
Ny isan'ireo singa ara-pitsipi-pitenenana mifandraika amin'ny fitomboana = 180.18 g / mol / 30.03 g / mol
Ny isan'ireo singa ara-pihetseham-poko mifandraika amin'ny fitomboana = 6
Dingana 6: Fikarohana ny molecular formula.
Ilaina ny singa enylika ara-pitsipi-pitenenana mba hahatonga ilay fitambarana, hampitombo ny isa tsirairay ao amin'ny formulael empirical amin'ny 6.
molecular formula = 6 x CH 2 O
molecular formula = C (1 x 6) H (2 x 6) O (1 x 6)
molecular formula = C 6 H 12 O 6
Ny endri-tsoratry ny molecule dia CH 2 O.
Ny formula molecule de compound dia C 6 H 12 O 6 .
Famaritana ny endri-tsoratra molecular and empirical
Samy manome fampahalalana mahasoa ireo karazam-bolo ireo. Ny fitsipika ara-tsiansa dia milaza amintsika ny ohatran'ny atôma ao amin'ny singa, izay afaka manondro ny karazana molekiolana (ny kôrihydrat, amin'ny ohatra).
Ny endri-tsoratra molekule dia mirakitra ny isan'ireo karazana singa tsirairay ary azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanoratana sy fanombanana ny fifangaroana simika. Na izany aza, ny rôbôla dia tsy manondro ny fandaminana ny atôma amin'ny molekiola. Ohatra, ny molekiolan'ity ohatra, C 6 H 12 O 6 , dia mety ho glucose, fructose, galactose, na sirikia tsotra hafa. Ny fampahalalana bebe kokoa noho ny fomban-drazana dia ilaina mba hamantarana ny anarana sy ny rafitry ny molekiola.
Asa famelabelarana fanovana
Inona no fahasamihafana misy eo amin'ny fihanaky ny akora simika sy ny fikajiana fizika?
Ny olana momba ny sela Galvanika
Ny fihenan'ny fihenam-bidy
Nahoana ny Oseana Blue?
Manampy amin'ny rano na rano ho solon'ny ranom-boankazo ve ianao?
Famadihana litera ho an'ny Millions
Ahoana no hanombanana ny lanjany na ny lanjany?
Ny isotope sy ny Symboolx ohatra ohatra
Ny angovo avy amin'ny olana matetika
Top Dance Songs tamin'ny 2009
Ny Adidy amin'ny Juilliard
"Ny Telo ambin'ny folo Tale" nataon'i Diane Setterfield - Book Review
Vehivavy anaram-bosotra avy ao amin'ny Baiboly
Top Colleges Liberia
Shakira Album Discographie
Ny lanonana fanombohan'ny Sikh an'ny Amrit Sanchar no voasoritra
Vehivavy mpiandraikitra ny taonjato faha-17
Habiter - hiaina
Biographie momba ny Mpanjaka Louis XVI ao Frantsa
Profile of Miller Sadistic and Rapist Charles Ng
Ny fomba hampihenana ny olana ara-bola any amin'ny oniversite
Moa ve i Maya Angelou nanoratra tononkalo momba ny orinasan'ny mpanavakavaka?
Fanontaniana manontany ny maso vaovao mety ho anao
Papa François: 'Ny Tenin'Andriamanitra no manolotra ny Baiboly sy manongana azy'
Top Bellamy Brothers Songs of the '80s
Fanapahana ny Fiangonana sy ny Fanjakana: Tena Misy ve ny Lalàm-panorenana?
Electric Buses - Fampidirana
Structures chimiques manomboka amin'ny taratasy I
Kanseran'ny Fitiavana sy ny Fitiavana
Tallulah Bankhead: Mpilalao sarimihetsika Flamboyant sy TV Host
Mialà sasatra mandritra ny fety
Ahoana no nahatonga ny fifidianana, ny lahy sy ny vavy, ny kilasy ary ny fanabeazana hisarika ny fifidianana?
Ny fifandraisana amin'i Etazonia amin'i Alemana